ပထမဆုံး အကြိမ်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2022 Toyota Tundra ရဲ့ အတွင်းခန်း ဒီဇိုင်း ! – MyMedia Myanmar
ပထမဆုံး အကြိမ်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2022 Toyota Tundra ရဲ့ အတွင်းခန်း ဒီဇိုင်း !
Toyota Tundra အမျိုးအစား ကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၂ နှစ် အတွက် လုံးဝ ဆန်းသစ်လာမယ့် All-New Model ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကို အခုချိန်အထိ လုံးဝ ထုတ်ဖော်ပြသထားတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့် Spy Shots တွေ အပြင် ပေါက်ကြားလာတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ထားရပြီးဖြစ်ကာ Toyota ရဲ့ လက်ရှိအချိန်ထိ တစ်ခု တည်းသော တရားဝင် ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ ကားရဲ့အပြင်ပိုင်း ပုံရိပ်အပြင် Teaser Campaign ကိုလည်း အနည်းငယ်ပဲ မြင်ထားရသေးတာ ကြောင့် အတော်လေး ကြာရှည်အောင် စောင့်ဆိုင်း နေရသလိုတော့ ခံစားရစေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ကားကို ပုံဖော်ဖို့ နောက်ထပ် အပိုင်းအစ လေး တစ်ခု ရရှိ ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး သေချာတာ ကတော့ ယခင် က မြင်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ မတူညီတာကတော့ အတွင်းခန်း ပုံရိပ်တွေဖြစ်နေတာ ပါပဲ။
တိတိကျကျ ပြောရရင်တော့ အတွင်းခန်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မြင်လိုက် ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Tundra Spy Shots တွေအရ ဆိုရင် Dash ရဲ့ အောက်ပိုင်း အနည်းငယ် လောက်ကို ပဲ မဖုံးအုပ်ထားတာ ကြောင့် မြင်လိုက်ရတာပါ။ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လိုက်ရတဲ့ တစ်ချက်က တော့ Toyota က ဟိုတလောတုန်းကမှ ထုတ်ဖော်ပြသထားတဲ့ အတွင်းခန်းအသစ်ရဲ့ Teaser ပါ ပုံရိပ်တွေနဲ့တော့ အတော်လေးကွဲပြား နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ ပုံရိပ် မှာ တော့ အလယ်တည့်တည့်က Infotainment Screen ကို ဖြစ်ပြီးတော့ Dash ရဲ့ အပေါ် ဘက် ကို ရောက်နေတာ တွေ့ရကာ အခု ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံ‌တွေမှာတော့ Dash ထဲမှာ အတော်လေး သေးတဲ့ Screen အနေနဲ့ ပဲ ဖြစ်နေ တာပါ။ ဒါကြောင့် ခန့်မှန်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင် အခု မြင်လိုက်ရတဲ့ ကားက အနည်းငယ် နိမ့်တာ ဒါမှမဟုတ် အလယ် အလတ် အဆင့် Trim Level တွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး Toyota ရဲ့ Teaser ထဲမှာတော့ အဆင့်မြင့် Higher-End Model ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံကို မြင်ရသလောက်တော့ Standard Instrument Cluster ကိုလည်း ယခင် Fully Digital Setup အစားတပ်ဆင် ပေးထားတာကို မြင် ရပြီး ပုံကို ရိုက်ယူထားနိုင်တဲ့ အနေအထားအရ မထင်ရှားတာကြောင့် အတိအကျ ပြောဖို့တော့ ခဲယဉ်းနေပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Display ရဲ့ အောက်အလယ် တည့်တည့်မှာ ခလုတ်များစွာ ကို မြင်တွေ့ထားရပြီး Minimalistic ပုံစံ ကို မြင်ချင်တဲ့ သူတွေ အဖို့တော့ စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်စေမှာအမှန်ပါ။ ဒါ့အပြင် ကျယ်ပြန့်ပြီး ကြီးမားတဲ့ Vents တွေနဲ့ Geometric ပုံစံတွေကလည်း အခြားသော Detroit Automakers ‌တွေ လိုမျိုးပဲ ထည့်သွင်း ပေးထားနိုင်တာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Toyota ဟာ ကားတွေရဲ့ အတွင်းခန်း ဒီဇိုင်း အသစ်တွေနဲ့ ပတ် သက်လာရင်တော့ သိပ်ပြီး အကြိုက် တွေ့စေမယ့်အရာတွေ ကို မပေးထားနိုင် သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ချက်ကတော့ အခု အတွင်းခန်းပုံရိပ် တွေကို မြင်တွေ့ရတဲ့ အခိုက်မှာ တစ်ပါတည်း ပါလာတာ က Camouflage အပြည့် ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အပြင်ပိုင်း ပုံရိပ်တွေပါပဲ။ တကယ်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် တွေကတည်းက Toyota အနေနဲ့ သူတိုရဲ့ ကားအ သစ် ကို အပြင်ပိုင်းတွေ အနည်းငယ် ပြသထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါ ပုံရိပ် တွေ ကတော့ အရှေ့ဘက်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ TRD Model တွေသာ ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားသော Tendra Model Trim တွေ မှာလည်း သူတိုရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန် တွေ ပါဝင် လာနိုင်သေး သလို အခု ချိန် အထိတော့ Tundra ကို အနောက်ဘက် ကနေ မမြင်တွေ့ နိုင်သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အ တော် များများ ကို မြင်တွေ့ ခန့်မှန်းထားနိုင်ပြီ ဆိုပေမယ့် ဖော်ပြစရာ တွေ လည်း အများကြီး ကျန်ရှိ နေပါသေးတယ်။ ကားတစ်စီး လုံးကို တရားဝင် ပြသနိုင်ဖို့ အချိန်ကိုအားလုံးက စောင့်မျှော် နေကြပေမယ့် Toyota ဘက်ကလည်း ထုတ်ဖော်မယ့် အချိန် အတိအကျကို အခုထိ မပြောကြားသေးသလို ဒီနှစ် အတွင်းမှာပဲ ထွက်ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Tundra နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက်တွေ အတော် များများ ထွက်ပေါ်လာတာ နဲ့ အတူ Toyota အနေနဲ့ လည်း နောက်တစ်ဆင့် တက်ကာ တရားဝင် ချပြတော့ မှာ သေချာနေတာကြောင့် တော်တော် လေးတော့ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းလာ နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ပထမဆုံး အကြိမ်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2022 Toyota Tundra ရဲ့ အတွင်းခန်း ဒီဇိုင်း ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-07-21T20:30:41+06:30July 21st, 2021|MYCARS MYANMAR|